Dowladda Somalia oo shaacisay kiisas Cusub oo Coronavirus ah - Radio Risaala: Somali News Online
Home Covid19 Dowladda Somalia oo shaacisay kiisas Cusub oo Coronavirus ah
Wasiirka Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Marwo Fowziya Abiikar Nuur ayaa soo saartay warbixinta maalinlaha ah ee COVID19,waxaana at ku sheegtay in la helay kiisas Cusub oo ah Feyruska Karoona .
Marwo Fowziya Abiikar Nuur ayaa caddeysay in la diiwaan geliyay 95 xaalado cusub oo COVID19 ah, oo kala jooga 72 Somaliland 17 Gobolka Banaadir 4, Koonfur Galbeed 4 halka Galmudug laga helay 2 Ruux,kuwaas oo tirada guud ee xaaladaha dalka laga diiwaan geliyay ka dhigeysa 1,689.
Bukaannada cusub oo 65 kamid ah waa rag, 30-na waa haween. 24-kii saac ee ugu dambeeyay waxaa Cudurka COVID19 u geeriyooday 5 Ruux,waxaana ka bogsaday 31 Qof.
Wasiirka Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada XFS, waxay ku baaqday in lagu dadaalo kahor tagga cudurka si loo yareeyo saameynta uu bulshada ku yeelanayo.
Previous articleDHAGEYSO: Warka Habeen 25-5-2020
Next articleTaliyaha Ciidanka xooga oo kulamo ka wada Cabudwaaq
Koonfur Galbeed oo Shaqada u fasaxday Guddoomiye Degmo